Wararka - ISBAHAYSIGA XOOGAN, VOLVO TRUCKS IYO XCMG FOOMKA DABKA ISBAHAYSIGA Istiraatiijiga ah
ISBAHAYSIGA XOOGAN, VOLVO TRUCKS IYO XCMG FOOMKA DABKA ISBAHAYSIGA Istiraatiijiga ah
Bishii Diseembar 10-keedii, Li Qianjin, maareeyaha guud ee shirkadda XCMG ee Nabadgalyada Dabka, heshiiska iskaashiga ee Xuzhou. Tani waxay ka dhigan tahay in Volvo Trucks ay si rasmi ah u noqotay lammaane istiraatiiji ah XCMG Fire.
Labada sano ee soo socota, XCMG Fire wuxuu ka iibsan doonaa ugu yaraan 200 Volvo FMX moodooyinka jiifka gaarka ah ee Volvo Trucks oo si gaar ah loogu talagalay xoogagga dab-demiska. Li Qianjin, maareeyaha guud ee shirkadda XCMG ee Badbaadada Dabka Co., Ltd. wuxuu si aad ah uga hadlay isbahaysiga ka dhexeeya labada dhinac: “Volvo Trucks waa sumad ganacsi oo caalami ah oo caan ka ah adduunka. Gawaarida Volvo waxaa lagu yaqaan nabadgelyadiisa, waxtarkeeda, iyo keydinta tamarta. Xulashada Volvo chassis-ka weyn ee xamuulka si loo ballaariyo suuqa-dhamaadka sare ee Dabka XCMG Istaraatiijiyadda kala duwanaanshaha ee lagu dhisayo astaan ​​hoggaamineed ee warshadaha ayaa ah mid muhiim ah oo muhiim ah. ”
Dong Chenrui si qoto dheer ayuu u oggol yahay: “Si loo siiyo dadka isticmaala mashiinnada dhismaha ee Shiinaha aalad gaar ah oo ammaan ah, hufan oo la isku halleyn karo waa hadafka Volvo Trucks. iskaashiga ayaa naga dhigaya himilooyin la aasaasay iyo tallaabo weyn oo horay loo qaaday. Gawaarida Volvo waxay si dhow ula shaqeyn doonaan dabka Xugong, gebi ahaanba waxay ka saari doonaan walwalka kooxda dab damiska iyagoo adeegsanaya gaari Volvo chassis, taas oo ah ujeedka ugu dambeeya ee iskaashiga istiraatiijiyadeed ee laba geesoodka ah. “
Naqshadeynta loogu talagalay dadka isticmaala dabka Shiinaha Dawaarka-sameeyaha gaarka loo sameeyo
XCMG Dabka la iibsaday markan waa Volvo FMX chassis gaar ah oo si rasmi ah ugu degay Shiinaha sanadkii 2014. Sannadkii 2014, jiil cusub oo taxane ah gawaarida Volvo ayaa laga diiwaangaliyay Shiinaha. Iyaga dhexdooda, qaabka FMX waxaa la dhihi karaa inuu yahay nooc mashiinka ka baxa wadada weyn ee sida gaarka ah loogu talagalay Volvo Trucks suuqa mashiinada dhismaha. Waxay leedahay faa'iidooyinka adkaysiga, amniga, isku halaynta, dhaqaalaha shidaalka iyo ilaalinta deegaanka. Si deggan ula macaamil bey'ado kala duwan oo qalafsan waxaana loo yaqaanaa "jiinka ugu adag ee injineernimada gawaarida".
Dong Chenrui, Madaxweynaha Volvo Trucks China (labaadna midig), iyo Li Qianjin, maareeyaha guud ee XCMG Difaaca Dabka (kan labaad bidix) iyo hoggaamiyeyaal kale ayaa qaatay
sawir kooxeed oo ka socda dhirta cusub ee XCMG Difaaca Dabka. Maaddaama ay tahay gaari xamuul culus oo loogu talagalay dhismaha injineernimada, taxanaha 'FMX' waxaa la soo saaray 2010. Farqiga u dhexeeya baabuurka jiifka waddada weyn. Kadib, badeecadani waxay noqotay badeecad caan ka ah suuqa Shiinaha waxayna noqotay wax soo saar u dhigma shirkado badan oo ka mid ah mashiinada dhismaha.
Dong Chenrui wuxuu sheegay in isku halaynta sare ee Volvo Trucks ay aad muhiim ugu tahay howlaha wadooyinka, waxayna ku leedahay faa iidooyin badan badbaadinta dabka, gaar ahaan markay kaqaybqaadanayaan samatabbixinta dabka xaaladaha degdega ah. Kalsoonida sare ee gawaarida dab damiska ayaa si gaar ah muhiim u ah. Daqiiqado iyo hal sekan ayaa ka dhigan in naf iyo maal badan la badbaadin karo.
Gawaarida dab damiska ee loo yaqaan 'XCMG' oo ku rakiban jiifka gawaarida Volvo waa
intaas oo kaliya maahan, laakiin Volvo gaari xamuul ah ayaa sidoo kale leh waxqabad heer sare ah. Wadada isteerinka waxay isticmaashaa nidaam istiraatiijiyad firfircoon oo firfircoon (VDS), darawalkuna wuxuu ku gaari karaa xakameynta iftiinka hal far kaliya. Tani waa gaari dab-damis Wadaha wuxuu si joogto ah u wadi karaa gaariga xitaa haddii ay jiraan xaalado adag oo waddo ah, taas oo kuu sahleysa inaad si dhakhso leh ku gaarto goobta aad u socoto.
Ku biir xoogagga si aad u ballaariso suuqa dhammaadka-dhamaadka ah.
Dagaaladda dabka ee XCMG waa hoosaad ay wada leeyihiin shirkadda XCMG Group. Waxay leedahay in ka badan 60 nooc oo ah alaabooyinka samatabbixinta dab-demiska oo ka kooban saddex qaybood: qaadista baabuurta dab-damiska, gawaadhida dab damiska ee u heellan, iyo gurmadka degdegga ah. Iibinta alaabtu waxay kaalinta koowaad ka gashay Shiinaha sannado badan, waana shirkaddii ugu horreysay ee caan ka ah Shiinaha ee soo gasha aagga ilaalinta dabka.
Gawaarida dab damiska ee loo yaqaan 'XCMG' oo ay ku rakiban yihiin aaladda loo yaqaan Volvo FMX chassis oo lagu soo bandhigay xafladda saxiixa
ayaa ka hadlay waxyaalaha quseeya jiifka gaariga dab damiska. Li Qianjin, maareeyaha guud ee dab-demiska XCMG, wuxuu yidhi, “Gawaarida dab damisku waa baabuur qaas ah oo qaata masuuliyada muhiimka ah ee badbaadinta iyo samatabbixinta waana inay noqdaan kuwo aan caqli gal ahayn. Hadafkeenu waa cad yahay, dooro alaab-qeybiyaha gawaarida Volvo inuu sameeyo waa inuu la kulmo imaatinka sare ee dab damiska, dhaqaalaha shidaalka oo sareeya, baahiyaha amaanka ee sare, iyo Volvo oo ah sumcadaha caanka ah ee adduunka ee gawaarida ganacsiga, si ay si buuxda u buuxiyaan shuruudahan. “
Xaqiiqdii, XCMG Fire iyo Volvo Trucks waxay leeyihiin taariikh dheer. Sannadkii 2017, XCMG Fire Fighting wuxuu u baahday inuu soo saaro gaari weyn oo dab-damis ah oo loogu talagalay nidaamyada kiimikada, kaas oo u baahnaa awood sare, xawaare sare, iyo shuruudo aad u sarreeya oo loogu talagalay waxqabadka jiifka. Markii aad dooranaysay National V chassis, Volvo Trucks FMX540 waxay ka dhex muuqatay alaab-qeybiyeyaal fara badan waxayna noqotay guuleystaha ugu dambeeya. Tan iyo markaas, Shuangyi wuxuu bilaabay inuu galo "xilligii bisha malabka." Waqtigan xaadirka ah, ku dhowaad dhammaan alaabooyinka ay soo saarto XCMG Fire Fighting waxaa lagu qalabeeyaa gaari xamuul Volvo ah, oo saamiga taageeraya Volvo chassis-ka ayaa gaaray 70%. Li Qianjin oo ka hadlaya xiriirka ay la leeyihiin Volvo Trucks, wuxuu ku soo koobay hal weedh: “Waxaa jira baahiyo suuq oo loo qabo in la helo badeecado ku habboon. Tani waa sababta aan markii hore u dooranay shaashadda Volvo. ”
Dong Chenrui wuxuu sheegay in Volvo Baabuurta xamuulka ahi aysan kaliya bixinaynin waxyaabaha XCMG Fire High-quality, laakiin sidoo kale inay siiyaan macaamiisha adeegyo kaladuwan oo buuxa. Xitaa haddii ay la kulanto dib-u-habeyn gaar ah, Volvo ayaa diri doonta kooxda adeegga ugu badan ee iibka kadib si ay ula macaamilaan sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan si loo hubiyo in gaadhigu had iyo jeer ku jiro xaaladda ugu fiican. Illaa iyo hadda, Volvo Trucks waxay leedahay 83 xarumo adeeg oo ku yaal suuqa Shiinaha, iyagoo kaalinta koowaad ka galay noocyada gawaarida la soo dhoofiyo. Sanadka 2021, Volvo Trucks waxay sii wadi doontaa kordhinta xawaaraha dhismaha isku xirka adeegga, waxayna ku dadaalaysaa adeeg bixiyeyaal tayo sare leh inay ku biiraan nidaamka adeegga Volvo Trucks.
Sumcad-ku-saleysan, sii wad wadashaqeynta qotoda dheer ee lala yeesho shirkadaha hoggaaminaya warshadaha
Maaddaama ay tahay sumcadda caanka ah ee ganacsiga caalamiga ah, Volvo Trucks waa shirkaddii ugu horreysay ee xamuul ah ee ballaarisa suuqa mashiinnada dhismaha ee Shiinaha iyo shirkaddii ugu horreysay ee qaabeeysa jiif gaar ah oo loogu talagalay warshadaha qalabka dhismaha. Tan iyo markii Volvo Trucks ay soo saareen qalab gaar ah oo loo yaqaan 'FMX chassis' oo loogu talagalay dadka isticmaala mashiinada dhismaha ee Shiinaha sanadkii 2014, waxay ku guuleysatay kalsoonida dadka isticmaala suuqa mashiinada dhismaha ee Shiinaha waxayna door wanaagsan ka ciyaartay sii ballaarinta suuqa mashiinada dhismaha Shiinaha. Marka la gaaro dhamaadka Nofeembar 2020, ganacsiga Volvo Trucks 'ganacsigiisa Shiinaha wuxuu gaarey koror sanad-sanad ah oo ah 64%, oo qaybta mashiinada dhismaha ay si gaar ah u qabteen.
Munaasabada saxiixa, Maamulaha Guud ee Dabka XCMG Li Qianjin (marka hore bidix) iyo Volvo Trucks Madaxweynaha Shiinaha Dong Chenrui (kan ugu horeeya dhanka midig) waxay is dhaafsadeen hadiyado waxayna isla galeen sawir kooxeed.
Aagga taageerada mashiinnada dhismaha mashiinka, sii wad inaad sii xoojiso iskaashiga qotada dheer ee lala leeyahay shirkadaha hoggaaminaya warshadaha. Hadafka joogtada ah ee Volvo Trucks.
Li Qianjin mar uu ka hadlaayay qorshayaasha taageeraya ee 2021, wuxuu yiri mustaqbalka, taxanaha oo dhan ee alaabooyinka la dagaalanka dabka ee XCMG waxay fulin doonaan xalalka habeynta qalabka ee Volvo Trucks. Isaga oo ka hadlaya rajada iskaashi ee labada dhinac, wuxuu adeegsaday "dhalinyaro in jacayl ku dhaco" tusaale sarbeeb ah: "Isbarasho midba midka kale ilaa is ogaanshaha, tani waa geeddi socod tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah leh, illaa aan u wada gaboobeyno. ”
Dong Chenrui wuxuu sheegay in suuqa Shiinuhu uu yahay Volvo Global Qayb muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyadda, Volvo Trucks waxaa ka go'an inay u keento adeeg iyo khibrad ka wanaagsan kuwa isticmaala Shiinaha mustaqbalka, iyagoo rajeynaya inay iskaashi la yeeshaan shirkado Shiinaha ka xoog badan oo riyooyin leh si loo abuuro wax ka sii wanaagsan. mustaqbalka.